Bubble Shooter 🥇 Midira ary mankafy amin'ny emulator.online
Bubble Shooter dia lalao ho an'ny Android sy iOS izay mila fisainana haingana sy tanjona kendrena. Ny lalao dia manana endrika be loko sy gameplay tsotra be. Zahao ny soso-kevitrao ary ianaranao milalao ity lalao mampiankin-doha ity.
Ahoana ny fomba filalaovana Bubble Shooter 🙂
Milalao Bubble Shooter an-tserasera maimaim-poana, mila fotsiny ianao araho tsikelikely ireto torolalana ireto:
Dingana 1. Sokafy ny navigateur tianao ary mandehana mankamin'ny tranonkalan'ny lalao Emulator.online
Dingana 2. Raha vantany vao miditra amin'ny tranokala ianao dia efa hiseho eo amin'ny efijery ny lalao. Ianao ihany no mila hilalao kilalao ary afaka manomboka misafidy ny fanaingoana tianao indrindra ianao. Raha vao mandresy lalao ianao dia afaka miakatra. Misy total 5 ambaratonga.
Dingana 3. Ireto misy bokotra mahasoa. Afaka "Manampy na esory ny feo", Omeo ny bokotra"Play"Ary manomboka milalao, azonao atao"Pause"sy"reboot"amin'ny fotoana rehetra.
Dingana 4. Mialà amin'ny fanesorana ireo bubble rehetra ao amin'ny lalao.
Dingana 5. Rehefa vita ny lalao iray dia kitiho "Haverina velomina" manomboka indray.
Inona ilay Bubble Shooter? 🤓
Bubble Shooter dia iray amin'ireo lalao fifaneraserana malaza indrindra mpitifitra bubble fantatra, noho ny mora ny milalao sy tena intuitive. Azonao lazaina izany Mifangaro amin'ny lalao roa hafa malaza be toa ny "tetris" ary ny "mampifandray efatra", izay mahatonga ny Bubble Shooter lalao mahafinaritra be.
Ny tanjona Bubble Shooter dia tena tsotra: manangona isa maro araka izay azo atao manimba bubble miloko. Mba hamongorana ireo bubble dia ilaina ny mampifandray miboiboika telo farafaharatsiny mitovy loko.
Tantaran'i Bubble shooter 🙂
Mahafinaritra sy malaza izany lalao ankamantatra izay efa nilalaovantsika rehetra tamin'ny fotoana sasany. Na izany aza, maro no tsy mahalala fa ny fakany dia ao amin'ny lalao iray nivoaka tamin'ny arcade japoney tamin'ny taona 80, ary io dia nantsoina hoe Bubble Bobble tamin'ny voalohany. Tamin'ny taona 90 vao nahatratra ny Andrefana izany fa nisy fanovana vitsivitsy tamin'ny lalao voalohany.
Bubble bobble Navoaka tamin'ny taona 1986 tao amin'ny arcades japoney. Tao anatiny, dragona kely roa, Bub sy Bob, no nifanatrika a Aventura, miaraka amin'ny singa sasany an'ny Puzzles sy ady amin'ny fahavalo misy foto-kevitra isaky ny dingana.
Miaraka amin'ny sary arakaraka ny fotoana, ary mampatsiahy ny tantara an-tsary Japoney, ny lalao niavaka teo amin'ny tsena noho izy mahafinaritra sy mampiankin-doha, zavatra ilaina amin'ny arcade. Ankoatr'izay, izy io dia iray amin'ireo lalao voalohany nampiasa ny hevitra "fiafarana maromaro", zavatra izay ho lasa malaza amin'ny lalao maoderina kokoa. Miankina amin'ny zava-bitan'ny mpilalao, mety ho hafa ny fiafaran'ny traikefa nahafinaritra
Toy ny tamin'ny voalohany, ny lalao dia nahomby tany Japon ihany, ao amin'ny 1994, ny orinasam-pamokarana Taito dia nanapa-kevitra ny hamonjy ireo olo-malaza fantany ary hamoaka azy ireo amin'ny lohateny vaovao. Niantso ity fotoana ity Puzzle Bubble, ary miaraka amin'ny mekanika piozila madio. Tonga tampoka ny lalao.
Tamin'ity kinova vaovao ity dia nahavita nanao zavatra hafa tamin'ny nahazatra azy izy ireo. Natokan'izy ireo tamin'ny fahavalo ireo lampihazo mba hahatonga antsika hiditra ao lalao piozila ny sangan'asa mitovy loko mitovy isa isa. Saingy, tsy toa an'i Tetris, tranga iray hafa amin'ny fotoana, ireo sombin-javatra dia avy any ambany ka hatrany ambony, navoakan'i Bub and Bob.
Raha mameno ny efijery ianao dia hahazo Game Over. Anisan'ireo sombin-javatra natsipy, izay rano miboiboika, ireo olon-dratsy amin'ny lalao kilalao mba hilazana azy.
Mpilalao roa afaka nandray anjara tamin'ny fiaraha-miasa izy ireo ary niara-nanisa isa. Ny hevitra dia ny hampahafantarana ireo mpilalao tamin'ny folo taona lasa ho an'ny mpilalao vaovao, saingy amin'ity indray mitoraka ity dia manana endrika vaovao izy. Ary niasa.
Karazana shooter bubble ⭐
Misy mihoatra ny 30 ny kinova an'ity lalao malaza ity, fa ny tena ilaina indrindra noforonina ho an'ny console video dia:
Ultra Bust-A-Move ary Puzzle Live Bobble ho an'ny Xbox console.
Bust-A-Move Deluxe ho an'ny PSP.
Puzzle Bobble 3D ho an'ny Nintendo (3DS).
Puzzle Bobble Online ho an'ny PC manokana.
Bubble Shooter, Free.
Amin'ireo voalaza rehetra ireo, tsy isalasalana, ny klone Bust-A-Move tena nahomby indrindra Mpanapaka baomba
Bubble Shooter dia manana bika tsotra miaraka amina tolo-kevitra mivantana. Amin'ity indray mitoraka ity dia tsy dia miahiahy loatra amin'ny fampidirana ireo singa mahazatra ao amin'ilay andian-dahatsoratra nanentanana azy ny lalao, fa kosa, amin'ny fitazonana ny lalao mampiankin-doha izay nampalaza azy.
Ny lalao dia mitazona ny paikady fanipazana ny spheres miaraka amin'ny zana-tsipìka, mba hifanaraka amin'ny lokon'izy ireo, sy ny marika famantarana. Ny fahasamihafana lehibe dia izany Bubble Shooter dia atolotra maimaim-poana amin'ny mpizaha na fampiharana finday, raha ny niandohany dia natao ho an'ny lalao konsole na PC.
Fitsipika Shooter Bubble 😍
Ny anao lehibe tanjona ao amin'ny Bubble Shooter dia esory ny baolina miloko rehetra avy amin'ny efijery nitifitra baolina miloko miaraka amin'ny tafondro.
Tadidio fa tsy maintsy mifanila baolina telo farafaharatsiny mitovy loko ka ireo rehetra ireo dia mipoaka, ary dia toy izany no hamaranana ny efijery amin'ny esorina ireo baolina rehetra. Ny lokon'ny ny baolina mivoaka avy amin'ny barika dia kisendrasendra, noho izany dia tsy mora araka ny feony.
Mba hanaovana izany dia tsy maintsy mikasika ny efijery ianao amin'ny lalana izay tianao hitifirana miaraka amin'ny tafondro, amin'ny fiheverana ny lokon'ny baolina izay nesorina mba hahitana ny fitovizany.
Ho fanampin'ny fananantsika ny fahaiza-manao Rehefa misafidy ny toerana hametrahana ny baolina dia tena ilaina koa ny manana tanjona tsara. Ny fikendrena ny tsy mety na amin'ny làlan-diso dia mety hiteraka vokatra mahafaty.
Tokony hitandrina ianao satria raha mahatratra ny lohasaha ny laharan'ireo baolina miloko dia resy ianao ny lalao ary tsy maintsy manomboka indray ianao.
Raha manana baolina vitsivitsy sisa ianao hamita ny lalao, na ny loko amin'ny baolina mivoaka avy amin'ny barika dia tsy manampy anao hanafoana ny baolina, hasehonay anao izany fitaka.
Apetraho ireo baolina miloko fa tsy liana amin'ny iray (na iray) mitovy loko efa anananao eo amin'ny efijery ohatra ianao amin'ny baolina roa raozy Ireo baolina voalohany ireo hiasa ho toy ny fototra ny manaraka, ary raha vantany vao azonao io loko io dia mila tapaho io fototra io, ny baolina rehetra eo aminy dia hanjavona ihany koa.
Azonao atao ny mamita ny lalao amin'ny fomba mandresy ary manakana ny baolina tsy hahatratra ny tafondro ka mahatonga anao ho resy.